Talooyin waxtar leh oo loo Diyaariyo DAT
Ka hor Maalinta Imtixaanka
1. Codso in ay qaataan DAT ah
2. Dooro taariikh
3. Dejinta jadwalka waxbarasho ah
4. Dooro qalabka saxda ah
5. joog caafimaad qaba
Halkan waxaa ku qoran liis ay ku qoran waxa laga filan karo marka aad hubinayso in xarunta imtixaanka:
Baaritaanka ka dib markii
maalinta imtixaanka, aadka u la filayey maalintii weli ka cabsan jirin ee ardayda pre-ilkaha ugu. Waxa aanu u leeyihiin in ay la maalintii la dareemayaasha iyo walaaca ka buuxsamay, maxaa yeelay, aadan hubin waxa la filayo. Waa in aad ogtahay waxa aad filan ka hor oo waxa uu xitaa yimaado. Waxaad noqon kartaa mid diyaar u noqon stress free maalinta imtixaanka. Haddaba waan tegi doonaa ka badan waxa aad u baahan tahay si ay u gartaan oo qaban si ay u diyaari maalinta aad u weyn.
Waxaan ku xusan wax walba oo aad u baahan tahay in la sameeyo ka hor maalinta imtixaanka si ay diyaar u noqon.
Tallaabada ugu horreysa la helo doono DENTPIN ah oo codsanaya in ay qaataan Imtixaanka Admission Ilkaha. Macluumaadka la xidhiidha habka codsiga waxaa laga heli karaa halkan.
Marka codsigaaga la ogolaado oo aad la soo xiriirtay Prometric ka dibna waxa aad awoodi kartaa in ay doortaan taariikhda ah DAT ah. Waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay in aad ka fiirsan marka aad dooranayso taariikhda ah DAT ah. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay leeyihiin in la beddelo taariikhda imtixaanka oo aad la kulmeyso wixii kharash dheeraad ah si go'aan sax ah markii ugu horeysay ee. Haddii aad u baahan tahay si markaas ballan kale waxaad u baahan doontaa in aad booqatid website Prometric oo guji xidhiidhinta qorshahooda ah si loo bilaabo nidaamka. Sidoo kale, liiska ujrada ee dib u dhigitaanka imtixaan, riix halkan iyo hoos u rogto post . Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah wax in la tixgeliyo marka xulashada taariikhda a:
a. Gal-up Hore: Waxaan kula talin lahaa saxiixa up ee taariikhda imtixaanka ugu yaraan lix todobaad ka hor taariikhda la filayo. Sababta ugu weyn ee sababta waxaa muhiim ah in is-hore waa si aad awoodo si aad u hesho taariikhda aad rabto in aad. Kuraastu way xadidan oo buuxin kartaa ilaa si dhakhso ah ugu Prometric Xarumaha ee ha wahsasho.
b. Soo qaado maalinta saxda ah ee toddobaadka: Marka xulashada taariikh ka fiirso wixii maalinta toddobaadka shaqayn lahaa ugu wanaagsan ee aad jadwalka. Anigu shakhsi ahaan lahaa jecel qaadashada DAT maalinta jimcaha ah si ay hal mar ayaan ku dhameysan waan tegi karaa hab xisbi oo toddobaadka oo dhan si ay ugu dabaal guulaha aan. Marka duub todobaadkan agagaarka Anigu waxba ma aan sida diiradda saaray waxbarashadeyda sida aan ahay inta lagu guda jiro toddobaadka soo, Sidaa darteed, Waxaan ka fogaadaan lahaa qaadashada imtixaanka bilowga toddobaadka on Monday ama Tuesday tan iyo markii aan soo noqon doonaa cusub off ee isbuucaan iyo u baahan tahay waqti ay dib ugu jeestaan ​​oo isku urursadaan. Waxaan u ogolaan lahaa inaan dhowr maalmood ka hor maalinta imtixaanka in ay yihiin lacag la'aan ah ka jeediya iyo Goynta si ay u diyaariyaan filan. Haddii ay suurtagal tahay, Waxaan u soo jeedin lahayd qaadashada on Friday ah iyo in la hubiyo in Isniinta ilaa Khamiista ee todobaadkii in si buuxda u furan yahay iyo in aad leedahay ma waajibaadka kale oo ka maalmood aad final of diyaarinta idiin kaxayn doonaa.
c. Soo qaado waqtiga saxda ah ee maalinta: Just u muhim ah sida xulashada maalinta saxda ah ee toddobaadka in ay qaataan DAT la xulashada waqtiga saxda ah ee maalintii si aad u qaadato. sida caadiga ah waxaa jira waqtiyo kala duwan laga heli karaa dhawr maalmood in ay qaataan DAT ah. Cimrigood oo dhan ma yeelan doonaan fursadaha waqti isku mid ah midna cimrigiisa oo dhan yeelan doonaan in ka badan hal doorasho. ma laga yaabaa in aad leedahay fursado badan oo ku saabsan maalinta imtixaanka iyo yeelan doonaan in ay ku qaadan at wax kasta oo waqti waa la heli karaa si talo this laga yaabaa in aanay adiga ku khusayn. Laakiin haddii aad leedahay ikhtiyaar ah ka dibna ka fiirso wixii waqti fiican ee aad jadwalka iyo idinkaba. Ma waxaad tahay qof subaxdii ama guumaysta habeen? Haddii aad leedahay ikhtiyaar in ay qaataan imtixaanka subaxdii vs. galabtii iyo aad tahay qof subax a, markaas iska cad subaxdii noqon lahaa idiin khayr roon. Haddii aad dareento in heerka isitcmaalo waxqabadka yihiin galabtii, ka dibna dooro waqti galabtii iyo imtixaanka markaas. go'aannadan u soo degin inuu nooca qofka aad tahay iyo waxa haboon style waxbarashada iyo baahida.
Waa inaad jadwalka waxbarasho ah oo la ogaado waxa aad u baahan tahay si ay u gaadho dhamaadka bil kasta, toddobaadkii, iyo maalin ilaa aad ka gaarto maalinta imtixaanka. Fiiri aan 8 Week Schedule Study caawimaad ku saabsan dejinta jadwalka adiga kuu gaar ah si ay u daboolaan baahida.
Baro khayraadka kasta suuqa iyo soo qaado kuwa la kulmi doonaa baahida iyo qaabka waxbarashada. Riix halkan inay halkaas ka akhrisan dib u eegista ah ee qalabka kala duwan ee dib u eegid DAT aan.
Fir, jimicsiga, ahaan bulshada, cuno caafimaad leh, oo aad hesho hurdo ku filan. Ma aha in aad si ay allabari ah noloshaada ama u dhigaa iyadoo aad diyaarinaya DAT ah. Maskaxdaadu waxay u baahan tahay in ay nastaan ​​iyo sidoo kale jirka si ay isticmaalaan habeenkii iyo maalmaha fasaxa si aad u nasato iyo jir ahaan nasan. Hubso in aad hesho hurdo ku filan habeenkii baaritaanka ka hor! Waxaad noqon doontaa ka welwelaysaa oo baaxaa u badan tahay si aad cabto shaah ah geedaha ama wax ay kuu ogolaaneysaa in aad si fiican u seexan, weli ma aad dareentid daraageeyey dul wakening. Hel in caado of seexan hore iyo helitaanka nasasho ugu yaraan hal usbuuc ka hor maalinta imtixaanka si aad u horumariyaan qaab hurdo caafimaad leh. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad sameyn kartid ka hor maalinta imtixaanka waa si aad u hesho hurdo fiican habeenkii! Waxaad dhalin doono inta ka sareeya on DAT haddii aad tahay jidh ahaan caafimaad oo heegan.
maalin ayaa ugu dambeyntii yimaado, waa maalinta imtixaanka. Bal i sii daa wadaagaan qaar ka mid ah talo waxa la sameeyo iyo in la siiyo xaqiiqooyinka sida in waxa ay ka sugayaan xarunta imtixaanka.
1. Hubso in aad hesho filan nasan habeen ka hor.
2. Toos waqti macquul ah iyada oo ugu yaraan saacado yar ay u harsan tahay baaritaanka ka hor.
3. Waxaa laga yaabaa dhigay alarm dheeraad ah oo keliya si aad u hubiso in aad soo jeedid marka aad u baahan tahay inaad.
4. Maalinta ku billaabo off la orod gaaban ku dhawaad ​​block. Hel dhiig la barwaaqaysan, qaado 30 daqiiqo oo ay ku fidin iyo jimicsi. Waxay kaa caawin doontaa in aad jidhkaaga si amar uu sidoo kale aad u kordhiso tamar si ay kaaga caawiso in ay ka gudbaan imtixaanka. Waxaa sidoo kale kaa caawin doonaa inaad dejiyaan dareemayaasha aad oo ay awoodaan si ay u qabtaan.
5. Cun quraac caafimaad leh, wax weli buuxinta aan dufan iyo culus. Waxaan u soo jeedin lahaa galaas casiir orange, oatmeal, miro, iyo rooti. Waxaad u baahan tahay inaad wax cunto ah in jirkaaga siin doonaa tamarta loo baahan yahay iyo awoodda maskaxda si laguu baaro oo la iska ilaaliyo cuntooyinka culus dufan in hoos jirkaaga iyo maskaxda xidhi doono.
6. Hubi inaad timaadid waqtiga xarunta Prometric. lahaa waxaan soo jeedinaynaa in wadida xarunta dhowr maalmood ka hor maalinta imtixaanka si aad u ogaato sida saxda ah, halkaas oo ay tahay. Waxay kaa caawin doonaa in aad looga hortago is badiyay waanan badin doonaa oo kaliya aad stress maalinta imtixaanka. Waxaan ku talinaynaa lahaa yimaada ugu yaraan 30 daqiiqo waqtiga imaatinka loo xilsaaray ka hor.
7. Soo qaado qadada ah waa inaad ku. Waxaad heli doontaa a nasashada qadada hal saac. Your qadada iyo waxyaabo kale oo aad u keeno xarunta imtixaanka lagu kaydin doonaa labiska si yaabee keeni xidhmo baraf ah in qadada haysan karto qabow haddii loo baahdo. Mar labaad, Dooro cuntooyinka ay idin quudin doonaa idinka iyo waxaad siin awoodda tamarta iyo maskaxda si fiican u qabtaan on imtixaanka ku.
8. Waxaad keeni kartaa qoraalada qaar ka mid ah in ay ka gaariga baran ka hor galaya xarunta imtixaanka. Ma u eegis deg deg ah oo ku saabsan wax kasta oo mawduucyo in aad rabto in aad leedahay cusub ee maskaxdaada marka aad bilowdo imtixaanka. Leave qoraalada ee gaariga oo ay la socdaan telefoonka gacanta aad, aadan rabin in ay ku keentaa oo halis ugu hesho in dhibaato xarunta imtixaanka.
9. Waxaan u soo jeedin lahaa samaynta stop god at musqusha ka hor inta aadan hubin in sidoo. Qaado neefsasho qoto dheer yar, naftaada dego haddii loo baahdo, oo dhan waxaa laga sugayaa inay si fiican u noqon. naftaada aad u diyaarisay maanta, aad ayaa diyaar u ah!
Waxaad la salaamay doonaa by duwaha imtixaan ah marka ay galayaan xarunta imtixaanka.
Keena laba foom oo aqoonsi – 1 aqoonsiga oo sawir ah (liisanka darawalnimada, baasaboor, gobolka ID, iwm) iyo qaab kale iyadoo magacaaga iyo saxiixa ku dul noqon kartaa (kaarka debit, credit card, iwm). Magacaaga waa in tallaabadaas labada nooc ee aqoonsiga iyo sidoo kale on your Boos Prometric.
Your sawir laga qaadi doonaa oo ay la socdaan baaritaan farta aad farta murdisada.
Waxaad waxa lagu meelaynayaa labiska ah oo u sheegay in ay faaruqiso jeebka ku haysato iyo quful qadada iyo wax walba oo kale gudaha labiska.
Waxaad dhawri doonaa ID iyo sidoo kale muhiim ah labiska aad u qaadanayso imtixaanka.
lama ogola in aad xanjo inta aad qaadanaysid imtixaanka, laakiin laba Kleenex laga yaabaa in aad soo dejin.
Waxaa lagu siin doonaa laba loox note iyo laba tip calamado erasable wanaagsan in la isticmaalo ee imtixaanka. Ha la leexiyo ama iyaga u xumeeyaan in si kasta! Ha taaban kormeeraha inta aad qaadanaysid imtixaanka!
Dhamaan sharciyada imtixaanka waxay kuu macnayn doonaan in ay.
Ka hor inta soo gelaya qolka imtixaanka waxaad yeelan doontaa inay la soo wareegto log maalinle ah oo sheegaya markii aad gasho imtixaanka iyo baaritaan buuxa jirka birta lagu ogaado lagu qaban doonaa. Waxay hubisaa in aadan u keeno wax qolka imtixaanka aad la reebo waxyaabaha loo qoondeeyay ka dhigi doonaa.
Ka dib markii u saxiixay-in kitaabka iyo dhamaystirka scan aad la geyn doonaa qolka si miiska aad shaqada loo xilsaaray isku duwaha imtixaanka a.
Marka buuxinta qeybtii hore ee imtixaanka idin keeni doonaa ID iyo muhiimka ah labiska adiga iyo baxo qolka imtixaanka. Waxaad heli doontaa inay la soo wareegto log maalin walba mar kale sheegaysa wakhtiga aad ka tageeyso iyo samayn baaritaan farta.
Hubi inaad taqaan markii aad bilowday in aad nasashada qadada iyo soo laabto ugu yaraan shan daqiiqo ka hor xilligii nasashada dhamaado si aad aan la dadajin doonaa ama bilaabaan goor dambe on qeybtii labaad ee imtixaanka.
Ka dib markii aad hal saac oo fasax qado aad ku celin doonaa nidaamka jeeg-in la scan a farta, scan buuxa jirka, iyo saxiixa-in.
Waxaa laguu ogol yahay in ay qaataan fasax musqusha haddii loo baahdo inta lagu jiro imtixaanka, laakiin waxaad u baahan doontaa inay la soo wareegto baxay iyo maraan nidaamka oo dhan marka aad ku soo laabto. Waxaan kula talin lahaa ma qaadan wax nasashada lagu jiro imtixaanka!
Haddii aad qabto wax su'aalo ah inta aad qaadanaysid imtixaanka, ama haddii ay jirto arrin aad computer ama baaritaanka ka dibna gacantaada aad kor u qaadi kara halka qolka imtixaanka iyo isuduwaha ah ayaa kaa caawin doona.
Marka aad dhameystirtay DAT ee ah warbixinta buundada aan rasmi ahayn muuqan doonaa shaashadda computer aad iyo xarunta imtixaanka daabacan doonaa natiijooyinka iyo nuqul kaa siin. Natiijooyinka Your weli la baari doonaa si loo xaqiijiyo natiijada, laakiin waxaan marnaba maqlin nin helitaanka dhibcaha kala duwan ee warbixinta rasmiga ah vs warbixinta aan rasmi ahayn in aad ku dul dhamaystirka baaritaanka la siiyaa. Fiiri xarunta imtixaanka, ururiyaan alaabtaada, iyo hesho Halkaas ka soo bixi! Hambalyo dhammeystirka DAT ah, tago oo u dabaal! Waxaad kasbadeen saas leeyihiin qaar ka mid xiiso leh.
Waxa kale oo aad sameyn kartaa in riix halkan waayo, liis maalinta imtixaanka ka ADA. Dhammaan macluumaadka muhiimka ah waxaa ka hore ayaa waxaa ka mid ahaa in boostada. Fiiri this video hoos ka Prometric ordaa hoos on nidaamka jeeg-in xarunta imtixaanka. Wax walba in video qariyeen boostada, laakiin si xor ah si ay u daawadaan haddii aad rabto!
40 isticmaalaa maanta